Xasuuqii Liverpool oo Xalay Bilaawday Sanadkan lama celin karo – Horseed Sports Club
Liverpool ayaa sii wadata guulaheeda kulamada saaxiibtinimo waxayna kulankeedii labaad ay guul ka gaadhay kooxda Fleetwood. Reds ayaa kulankan guul ku soo gaadhay 5:0 waxaana goolasha u kala dhaliyay da’yarka Marko Grujic,Ben Woodburn halka Lucas uu muddo dheer kadib gool ka dhaliyay kulankan waxaana laba gool raacsaday Roberto firmino.
Tababare Jurgen Klopp iyo kooxdiisa Liverpool ayaa ciyaarayaY kulankoodii labaad ee saaxiibtinimo ee ay ugu diyaar garoobayaan xili ciyaareedka cusub. Klopp ayaa markale shaxda goolkiisa ku soo bilaabay Karius waxaana afarta difaaca ah ku soo wada bilawday Flanagan, Matip, Lovren iyo Moreno.
Waxaana khadka dhexe ka wada ciyaarayay Stewart, Grujic iyo Alexander-Arnold oo kulankii hore wacdaro soo badhigay. Markovic ayaa weerarka ka caawinayay Danny Ings iyo Sadio Mane. Saxiixyada cusub ee Grujic,Matip iyo Karius ayaa dhamaan kulankan ku soo wada bilawday laakiin Grujic ayaa kulankiisii ugu horeeyay ka soo muuqanaya sahxda Reds.
Kaydka: Bogdan, Firmino, Lucas, Brannagan, Ilori, Kent, Smith, Wisdom, Ejaria, Randall, Woodburn
Fleetwood Town:Neal, Wright, Eastham, Ryan, Ball, Grant, Davis, Nirrenold, Deacon, Cole, Bell
Kaydka: Cairns, Jonsson, Pond, Kip, Bolger, Duckworth, Sowerby, Haughton, Osborne, Hunter Nadesan
Liverpool ayaa ciyaarta ku bilaabtay dardar fiican waxayna markiiba raadinaysay goolka furitaanka waxaana markiiba saamayntooda la soo baxay Marko Grujic iyo Sadio Mane oo xili ciyaareedkan kooxda Klopp door wayn ku yeelan doona. Marko Grujic oo kulankiisii ugu horeeyay shaxda Klopp ku soo bilawday ayaa muujiyay tayadiisa ciyaareed iyo sababtii loo barbar dhigayay Steven Gerrard.
Daqiiqadii 13 aad Danny Ings ayaa kooxdiisa Liverpool ka qasaariyay fursadii ugu fiicanyd ee ay hogaanka ciyaarta kula wareegi kareen kadib markii rekoodhe lagu abaal mariyay kooxda Reds. Difaaca midig ee kooxda martida loo ahaa ayaa qalad ku galay Marko Grujic oo xerada ganaaxa Fleetwood ku jiray laakiin dadaalkii darbada Ings ayaa noqday mid lagu guuldaraystay.
DAQIIQADII 18 aad Liverpool ayaa heshay goolkeeda furitaanka waxaana akownkiisa gool dhalinta Liverpool furtay Marko Grujic oo si xoogan kulankan uga dhex muuqday wuxuuna goolkan ka dhaliyay meel goolka Fleetwood u jirtay 20 yards. wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Reds hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Kubbad ay marka hore ka soo shaqeeyay Alberto Moreno iyo Sadio Mane ayaa goob fiican ugu tagtay Grujic kaas oo darbo fiican goolka ku bartilmaameedsaday wuxuuna sidaa ku dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxdiisa cusub ee Liverpool. Grujic ayaa farxad wayn ka muujiyay in uu kulankan ka dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee waayihiisa ciyaareed ee Reds.
DAQIIQADII 22 aad Liverpool ayaa markale ku dhawaatay in ay hesho goolkeeda labaad waxaana markale Reds goolka labaad u saxiixi gaadhay Marko Grujic laakiin markan birta goolka ayaa ka beenisay waxa u muuqday goolkiisii labaad ee Liverpool.
Wax yar kadib Sadio Mane ayaa helay fursad fiican laakiin fursadiisa ayaan noqon mid uu gool u badalay, waxayna Liverpool u muuqatay mid ku dhaw goolkeeda laabad. Da’yarka Reds ee Alexander-Arnold oo uu markale Klopp fursad siiyay ayaa muujiyay awoodiisa ciyaareed isaga oo sidii kulankii hore soo badhigay qaab ciyaareed aad u fiican.
Markovic ayaa sidoo kale dadaal badan muujinayay laakiin indhaha ayaa si wayn u yahay Marko Grujic oo ahaa xidigii qaybta hore Reds fursadaha ugu fiican helay isla markaana goolka dhaliyay.
Waxyaabaha kale ee kulankan ka baxsanaa ee lagu arkay kulankii Liverpool iyo Fleetwood ayaa ah xidig kooxdan ka tirsan oo aad iyo aad ugu muuqaal eeg xidiga kooxda Leicester City ee Jamie Vardy. Waxaana lays waydiinayay in Fleetwood ay kooxdeeda ku hayso Jamie Vardy kale.
Qaybta hore ee kulankan ayaa ku dhamaatay 1:0 ay Liverpool hogaanka ku haysay balse ay kooxda Klopp ahayd kooxda gacanta sare ku lahayd ciyaarta iyo natiijada.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe tababare Jurgen Klopp ayaa sidii kulankii hore shax kale ku soo galay qaybta danbe ee kulankan si la mid ah kooxda Fleetwood.
Shixihii qaybta danbe:
FLEETWOOD: Cairns, Jonsson, Pond, Kip, Bolger, Duckworth, Sowerby, Haughton, Osborne, Hunter Nadesan
LIVERPOOL: Bogdan, Randall, Wisdom, Ilori, Smith, Lucas, Brannagan, Ejaria, Kent, Woodburn, Firmino
Markiiba Liverpool ayaa albaabka u garaacday goolkeeda labaad waxaana hogaanka udheereeyay da’yarkeeda Ben Woodburn kaas oo ciyaartan ku soo badhigay qaab ciyaareed ay ugu raaxaysteen jamaahiirta Reds wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:0 ay Liverpool hogaanka ku dheeraystay.
Da’yarka Ben Woodburn, Brannagan, Ejaria iyo Kent ayaa qaybta danbe noqday ciyaartoyda maaweelinayay jamaahiirta Reds halka Firmino uu weerraka ku soo kordhiyay khibradiisa. Daqiiqadii 69 aad Lucas ayaa ciyaarta hurada u diray wuxuuna Reds udhaliyay goolka saddexaad kadib markii uu Kent kubbad fiican ka soo karoosay dhinaca midig, Lucas ayaana ciyaarta ka dhigay 3:0 ay Liverpool hogaanka ugu raaxaysanayso.
Laba daqiiqo kadib goolka Lucas xidiga kale ee ree Brazil ee Roberto Firmino ayaa Reds u keenay goolka afraad wuxuuna ka faa’iidaystay kubbad ay si cajiib ah u soo ciyaareen Ejaria iyo Woodburn, waxaana marka hore goolkan u muuqday in uu dhalinayo Woodburn oo difaaca iyo goolhaya Fleetwood kala jeediyay laakiin Firmino ayaa kubbada oo taala lugaha Woodburn si fiican shabaqa ugu darbeeyay. Ciyaarta ayaa noqotay 4:0 ay da’yarta Liverpool ku xaaqayso kooxda martida loo ahaa ee Fleetwood.
Waxaa gooladha Liverpool soo gabagabeeyay Roberto Firmino oo waqti dheeriga ahaa goolkiisa labaad iyo goolka shanaad ee Reds dhaliyay laakiin waxaa shaqada goolkan si fiican u soo qabtay Woodburn kaas oo sameeyay gool caawinta goolkan isla markaana hadiyad soo siiyay Firmino oo goolkan ku dhamaystiray sida gu sahlan waxayna ciyaartu noqotay 5:0 ay Reds ku gumaadayso kooxda Fleetwood.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 5:0 ay Liverpool guul kaga gaadhay kooxda ay martida u ahayd ee Fleetwood, wuxuuna kulankani muhiimad gaar ah u lahaa da’yarka Marko Grujic iyo Ben Woodburn oo dhaliyay goolashoodii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Reds. Sidoo kale da’yar badan oo uu Klopp fursad siiyay ayaa kulankan isku muujiyay.